SONATA-CANTATA: January 2009
ဒီနေ့တော့ သင်တန်းကို နည်းနည်းနောက်ကျရောက်တယ်။
Kim က Family Member အခေါ်အဝေါ်တွေ သင်နေပြီ။ Family Tree လေးနဲ့ မူကြိုအတန်းစာ ဆိုပြီး ပျင်းမိတယ်။
Brother (older/ younger) Sister (older/ younger)
cousin (same for male and female)
Mei Leen က
တိတ်ခွေထဲက Conversation ကိုနားထောင်ခိုင်းတယ်။ အမျိုးသမီး တစ်ယောက်က သူ့မိသားစုဝင်တွေရဲ့ ဓာတ်ပုံတွေကို အခြားတစ်ယောက်ကို ပြပြီး ဒါက ဘယ်သူ ဒါက ဘယ်ဝါ စသဖြင့် ရှင်းပြနေတာ Describing the person in the photos ပေါ့။ နောက် သင်တန်းသူတွေကို ဓာတ်ပုံတွေပေးပြီး ဘယ်ပုံကတော့ ဘယ်သူဆိုတာ ပြန်ပြောခိုင်းတယ်။ ဒီတော့မှ အိပ်ယာကနိုးသလို ဖြစ်သွားတယ်။
ရောက်ပါပြီ Christina အလှည့်။ သင်တန်းသူတွေ အားလုံးကို မတ်တပ်ထခိုင်းတယ်။ teacher တွေကိုရော အကုန် ထခိုင်းတယ်။ ပြီးတော့မှ shake shake shake your body ဆိုပြီး လေးတွဲတွဲ ဖြစ်နေတဲ့ စာသင်ခန်းကို သွေးပူလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခိုင်းတယ်။ (ကိုယ်ကတော့ မ shake ခဲ့ပါဘူး။ stretched my body ပျင်းကျောတွေက ဆွဲဆွဲဆန့်ရတယ်။)
Relationship Stages တွေနဲ့ ပတ်သက်တာတွေ ဆွေးနွေးပြီး ဒီလေ့ကျင့်ခန်းလေး လုပ်ခိုင်းတယ်။
Fill in the Gaps. Place Sentences In The Correct Order.
out -- engaged -- together -- invited -- honeymoon -- home -- married -- baby
A) John and Jane got __________ six months after their first date.
B) John hada__________ girl.
C) John __________ Jane out to dinner for their first date.
D) Jane took John __________ to meet her parents.
E) They went to Hawaii for their __________.
F) John and Jane started going __________ together immediately after their first date.
G) John and Jane got __________ayear after they got engaged.
H) John and Jane decided to move in __________.
ပြီးတော့မှ အဲ့ဒီအဆင့်တွေကို အစဉ်လိုက်အတိုင်းစီပါတဲ့။ (No. H ကို ဘယ်နားထားကြမလဲ အငြင်းပွားသွားတယ်။ Christina ကလေ သူကတော့တဲ့.. အဲ England မှာတော့တဲ့.. No. D ရဲ့ အရှေ့မှာ ထားပါတယ်တဲ့…)
ကိုယ်အကြောင်းလေးတွေကိုယ် အချို့မူလည်း ပြန်ပြောင်းသတိရ၊ အချို့မူလည်း စိတ်ကူးယဉ်နိုင်ရန် အောက်ပါ လေ့ကျင့်ခန်းလေး စိတ်ထဲကလုပ်ကြည့်ပါလား။ (မေးခွန်းအားလုံး မဖြေမနေရ။ အယ် မေ့သွားပြီဆိုတဲ့ အဖြေ လက်မခံပါ။ စာအုပ်ပြန်လှန်ကြည့်ခြင်း၊ နီးစပ်ရာထံ အကူအညီတောင်းခံခြင်း စသည့် helpline များ အသုံးပြုခွင့် ရှိပါသည်။)
A) Where did you go on your __________? (honeymoon)
B) When is the good age to __________ married? (get)
C) When did you and your husband first move in __________? (together)
D) Have you ever invited anyone __________? (out)
E) Have any of your female friends recently hada__________? (baby)
F) Have you ever taken anyone __________ to meet your parents? (home)
G) How long did you and your husband go out __________ before getting married? (together)
H) Have any of your friends recently gotten __________ to their boyfriends? (engaged)
ဒီနေ့မှာတော့ Transportation အကြောင်း သင်ယူကြရပါတယ်။ ထွေထွေထူးထူးတော့ ရေးပြစရာမရှိလို့ အကြမ်းဖျင်းလေး ဖတ်ချင်ရင် ဖတ်ကြည့်ဖို့ပါနော်။
What is Public/ Private transport? Which one do you prefer?
taxi tram ferry cable car train truck rickshaw
1. Which form of public transport do you use? Which do you use most?
2. Choose one kind of transport, and complete the table. Which statements do you think are true? Discuss your answers with your partner.
a. They’re comfortable.
b. They usually come on time.
c. They’re expensive.
d. They’re often crowded.
e. They don’t have to wait long.
f. They’re slow.
g. It’s an enjoyable way to travel.
h. It’sasafe way to travel.
Where did you go on your last holiday?.. How did you get there?.. How much did it cost?
Three people say how they get from Washington to New York. Fill the gaps with words from the box.
costs -- reaches -- gets -- takes -- leaves -- arrives
A. I usually fly. If I leave home at 6:30, I can catch the 7.30 a. m. flight, which __________get to La Guardia Airport at about 8.30. I’m in the centre of New York by 9.15 so that the whole journey _________ takes less than3hours. It’s expensive – it _________ about $300 return – but it’s very quick. And there’saplane every hour.
B. I usually take the Greyhound bus. It _________ Washington at9a. m., and _________ in New York at 1.40 in the afternoon. The New York bus terminal is in Manhattan, so it’s very convenient, and it only _________ about $85 return on weekdays.
C. I usually go by train, because it’s onlyabit slower than the plane and it’s more reliable. It’s about $100 return. The journey ________ about4hours. I usually catch the 10.30 train, which __________ New York at 10 past 2. It’s comfortable, and it’s always on time.
What are the pros & cons of travelling by …………..(name of transportation)?
Day4သင်တန်းအပြီးမှာ Kim က ကျမကို interview ပါတယ်။ Kim ဟာ ကျောင်းသုံးစာအုပ်တွေ ထုတ်ဝေတဲ့ ကုမ္ပဏီက editor တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး စာသင်ကြားမှု အတွေ့အကြုံမရှိသေးပါဘူး လို့ သူ့ကိုယ်သူ မိတ်ဆက်ပါတယ်။ Kim မေးခဲ့တဲ့ မေးခွန်းတွေနဲ့ ကျမဖြေခဲ့တဲ့ အဖြေတွေကတော့... ဒန် တန့် တန်...
Labels: BC English Course, ဒိုင်ယာရီ, သီတာ
စုစုပေါင်း (၁၂)ယောက်ရှိတဲ့ List က ကိုယ့်နာမည်ကို ကြည့်ပြီး အခန်းထဲဝင်တော့ အထဲမှာ ကိုရီးယားသူတွေရောက်နှင့်နေတယ်။ အခန်းအပြင်ပြန်ထွက်ပီး နာမည်စာရင်းကို တစ်ခါပြန်ကြည့်သေးတယ်။ ဓာတ်လှေကားအတူ စီးခဲ့တဲ့ တိုင်ဝမ်က PhD တရုတ်အမျိုးသမီး အခြားအခန်းထဲ ၀င်သွားလို့ အဲ့ဒီအခန်းရှေ့က နာမည်စာရင်း List ကို သွားဖတ်တော့ Singaporean တွေရဲ့ နာမည်တွေ အစဉ်လိုက်တွေ့တယ်။ ငါတော့ Basic အတန်းရောက်ပြီလို့ သုံးသပ်မိပါပြီ။ ဘယ်တော့မှလည်း တိုးတက်တော့မှာ မဟုတ်ပါဘူးလို့ ဆုတ်နစ်သော နှလုံးသားဖြင့် တွေးထင်ရင်း ပို၍ပင် ၀မ်းနည်းလာမိသလိုခံစားရပါတယ်။
သင်တန်းသား ၁၂ယောက်ကို စားပွဲ တစ်ခုလျှင် ၄ယောက်ကျစီဖြင့် အုပ်စု ၃စု ခွဲလိုက်ပါတယ်။ ကျမ ထိုင်မိတဲ့ စားပွဲမှာ ကိုးရီးယားသူ ၃ဦးနှင့် ဖြစ်ပါတယ်။ (သင်တန်းနေ့တိုင်းကို ဒီအုပ်စု အတိုင်းထိုင်စရာမလိုပါ။)
ဒီနေ့မှာတော့ ဆရာမ ၆ယောက်က တစ်ယောက်လျှင် မိနစ်၂၀စီဖြင့် ၁၂၀-မိနစ် (၂-နာရီ)ကို ဆက်တိုက် သင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ပထမဦးဆုံး စသင်တဲ့ ဆရာမက Kim ဆိုတဲ့ Singaporean တရုတ်လူမျိုးပါ။ စာသင်ကြားမှု အတွေ့အကြုံမရှိသေးသူလို့ ခန့်မှန်းရပါတယ်။ (နောင်မှာ ကျမရဲ့ မူပိုင်ဆရာမ ဖြစ်လာမဲ့သူပါ။ ကျမ ခန့်မှန်းချက် မှန်ကန်ကြောင်းကို နောက်ပို့စ်တွင် အကျယ်ရေးပါမည်။) နီပြီး အနည်းငယ်ပြူးကျယ်နေတဲ့ သူမျက်လုံးတွေနဲ့ တုံ့ဆိုင်းနေတဲ့ သူ့အသံက nervous ဖြစ်နေတာကို ဖေါ်ပြနေပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့်သူဟာ အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ကြိုးစားနေတယ်လို့လည်း ခံစားလို့ရပါတယ်။
Getting to know you ဆိုတဲ့ topic အတွက် Kim က
1. Can you speak3languages?
2. Do you like to eat durians?
4. Do you like to eat chocolates?
5. Do you have more than3children?
9. Do you have more than 20 pairs of shoes?
ဆိုတဲ့ outline မေးခွန်းတွေထဲကမှ ကျမကို မေးခွန်း သုံးခု ကောက်နုတ်ပြီး မေးပါတယ်။
Can you speak3languages? my answer is No.
Can you drive? No.
Kim: Ok, Ok..the last question, Can you swim? No.
ဘယ်လောက် စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းလိုက်ပါသလဲ … ?
ကိုရီးယားသူ သုံးဦးစလုံး language ၃-ခုမတတ်ပေမဲ့ ကားတော့ မောင်းတတ်ကြပါတယ်။
အစကတည်းကမှ စိတ်အားငယ်ချင်နေတာ ပိုလို့ down သွားပါတယ်။
နောက် ဒုတိယအနေနဲ့ အလှည့်ကျတဲ့ ဆရာမကတော့ Mei Leen ပါ။ သူကလည်း Singaporean တရုတ်လူမျိုးပါပဲ။ သူကတော့ အသက်-၅၀ ၀န်းကျင်လို့ ခန့်မှန်းရပြီး သင်ကြားမှု အတွေ့အကြုံရှိသူလို့ သူ့ရဲ့ ဟန်ပန်အရ ခန့်မှန်းရပါတယ်။ English သင်ဖို့ သင်တန်းတက်နေသူဆိုတော့ ဆရာမဖြစ်မယ်ဆိုလျှင် အခြားဘာသာရပ်ကို သင်တာဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ အတွေးဝင်နေမိပါတယ်။
သူကတော့ ကျောင်းသူတွေကို စာရွက်အ၀ါ အပိုင်းလေးတွေတစ်ယောက် တစ်ရွက်စီဝေပေးပြီး အဲဒီစာရွက်ပေါ်မှာ အောက်ပါ မေးခွန်းတွေရဲ့ ကိုယ်ပိုင် အဖြေကို ရေးပါတဲ့။
1. Who is someone famous that you would like to meet?
5. Which country would you like to visit?
ပြီးတော့မှ ကိုယ့် group ထဲမှာ ဘာကြောင့် ဆိုတာကို အချင်းချင်း ဆွေးနွေးပါတဲ့။
ကျမတို့ အဖွဲ့ထဲမှာ No. 1 မေးခွန်းအတွက် ကျောင်းသူနှစ်ဦးရဲ့ အဖြေဟာ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းစွာ တူနေပါတယ်။ Barack Obama ပါတဲ့။ Why Obama? ကျမကမေးပါတယ်။ He is the first African American President in United State and he looks intelligent. နောက်တစ်ယောက်ကတော့ ရုပ်ရှင်မင်းသား Nicolas Kage ပါတဲ့။ Why? ဆိုတော့ သူ့ရဲ့ ဇနီးက ကိုရီးယားသူမို့ပါတဲ့။ ဘ၀တူ အိမ်ထဲနေသည့် အိမ်ရှင်မတွေ ဖြစ်ပေမဲ့ ခေသူတွေတော့ မဟုတ်ကြဘူးနော်။
နောက်ဆရာမကတော့ ရှေ့ကဆရာမ တွေလို “Good morning!” တို့ … “Hello everybody” တို့လို အားလုံးကို သိမ်းကျုံး နှုတ်ဆက်တဲ့ အသုံးအနှုံးမျိုးတွေနဲ့ မစပါဘူး။ ကျမတို့တွေရှေ့မှ ရေးပြီးချထားရတဲ့ နာမည်တွေကို လိုက်ဖတ်ပြီး Hello Thida...Hello Mi Ae စသဖြင့် တစ်ယောက်ချင်းစီကို နာမည်ခေါ်ပြီး နှုတ်ဆက်ပါတယ်။ ပြီးတော့မှ I’m Christina. I’m from England. နောက်ပြီး တဆက်တည်း ဆိုလိုက်ပါသေးတယ်။ Do u know England? တဲ့.. ကျမလည်း သူ့လို ဒါတောင်မသိဘူးလားဆိုတဲ့ သဘောမျိုးပါတဲ့ အဖြေပါပီးသား မေးခွန်းကို လူတွေရှေ့မှာ မထေ့တထေ့ပုံစံလေးနဲ့ Do you know Burma? လို့ မေးလိုက်ချင်စမ်းပါတော့တယ်။
အံ့သြစရာကောင်းတာက သင်တန်းသူတွေရဲ့ နာမည်ကို သူအလွတ်မှတ်မိသွားပါပြီ။ စာသင်ရင်း အလျဉ်းသင့်သလို နာမည်တွေခေါ်ပြီး မေးခွန်းတွေမေးတော့တာပဲ။ (သူတို့တွေဟာ တော်ကို တော်နေကြတယ်ဆိုတာ ငြင်းလို့မရပါဘူး။ တဖက်စောင်းနင်း အထင်ကြီးနေတာ မဟုတ်ကြောင်း ဒီနေရာမှာ မရှင်းပါရစေနဲ့ဦး။)
To have in common with friends ဆိုတဲ့ ခေါင်းစီးအောက်မှာ သူက သင်တန်းသား တွေမှာ ဘယ်လို တူညီတဲ့ အချက်တွေရှိပါသလဲလို့ မေးခွန်းလေးမေးလိုက်တော့ သင်တန်းသူ တစ်ယောက်က ဖြေပါတယ်။
We all are women တဲ့။ ဟုတ်ပါတယ်။ တာဝန်ခံဆရာ Mr. Keith ကလွဲရင် စာသင်ခန်းထဲမှာ ဆရာတပည့် အားလုံးဟာ အမျိုးသမီးတွေချည်းပါ။ ဒီတော့ Christine က Mr. Keith ဟာ ဒီသင်တန်းအတွက် Special woman ပါဆိုတော့ သူကလည်း သူစားပွဲမှာ ထိုင်နေရင်း ကနွဲ့ကလျဟန်လေး လုပ်ပြလေရဲ့။
စသဖြင့် topics လေးတွေ ချပေးလိုက်ပြီး ကိုယ့် partner နဲ့ ဆွေးနွေးခိုင်းပါတယ်။ ကျမနဲ့ ကျမရဲ့ partner (Mi Hyun) တို့ Shopping နဲ့ Sport မကြိုက်တာ တူလို့ နှစ်ယောက်သား တပြုံးပြုံးနဲ့ပေါ့
နောက် တစ်ယောက် အလှည့်ကျတဲ့ ဆရာမကတော့ Olivia ဆိုတဲ့ ချောမောလှပ ပြုံးချိုသွက်လက်နေသူလေးပါ။ သူက ဒီစာလုံးလေးတွေကို ချရေးလိုက်ပါတယ်။ အဲ့ဒါ သူ့အကြောင်းတွေပါတဲ့။ သူ့ဆီက ဒီလိုအဖြေတွေ ကြားရဖို့ ဘယ်လိုမေးခွန်းတွေ မေးရမလဲဆိုတာကို စာရွက်မှာ ချရေးစေပါတယ်။
နောက် အဲ့ဒီမေးခွန်းတွေ အတွက် ကိုယ်နဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ အဖြေတွေကိုလည်း ချရေးစေပါတယ်။ တစ်ယောက်ချင်းစီရဲ့ အဖြေတွေကို လိုက်ကြည့်နေခဲ့ပြီးမှ Nilsa (ဖိလစ်ပိုင်မှ) for your favourite colour, I saw very strange answer, pink/orange. why? Nilsa က ပြန်ဖြေတာကတော့ pink က သူ့အမျိုးသားစိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ခဲ့တဲ့ သူတို့ မင်္ဂလာဝတ်စုံ အရောင်ပါတဲ့။ orange ကတော့ သူ့ရဲ့ favourite ပါတဲ့။
နောက်လာသူကတော့ HuiYing ဆိုတဲ့ ယောက်ျား ဆန်ဆန် ဆရာမလေးပါ။ သူကတော့
Note down… လို့ ရေးချလိုက်ပြီး
My Learning experiences…အကြောင်း
1. What are your reasons for learning English:
2. What were your previous English language learning experience(s):
3. How you were taught inaclass
4. What did you enjoy in the process?
5. What are the areas you need to practice:
စတဲ့ အချက်တွေ ဆွေးနွေးပါတယ်
ဒီနေ့ အတွက် နောက်ဆုံး သင်မဲ့ ဆရာမကတော့ အိန္ဒိယ လူမျိုး Rashmi ပါ။ သူကတော့ ဒီသင်တန်းမှာ တွေ့ဆုံရတဲ့ ကျောင်းသားတစ်ယောက် အကြောင်းကို သူ့ဆီကို စာတစ်စောင်ရေးခိုင်းပါတယ်။
ပြီးတော့ ကိုယ်ရေးထားတဲ့ စာကို တစ်တန်းလုံးကြားအောင် ပြန်ဖတ်ပြစေပါတယ်။
ကျမတို့ အုပ်စုထဲက Mi Ae ကတော့ ကျောင်းခန်းထဲ ၀င်လာရင် တံခါးကို ဒုံးဒိုင်မြည်အောင် ကြမ်းတမ်းတဲ့ အမူအယာရှိတဲ့ ပီကေ အမြဲ ၀ါးနေတဲ့ ကျောင်းသားအကြောင်း Complain letter မျိုးရေးပါတယ်။ (တကယ်တော့ အတန်းထဲမှာ မရှိပါဘူး။ သူ စိတ်ကူးယဉ်ပြီးရေးတာပါလို့ စာကိုမဖတ်ခင်အယင် ရှင်းပြပါသေးတယ်။ သူတို့ သွားပုံကို ကျမ တိတ်တခိုး အတုယူမိပါတယ်)
Writing letter informal ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ Personal စာတစ်စောင်ရဲ့ ရှိသင့်တဲ့ အင်္ဂါရပ်တွေကို ရှင်းပြပါတယ်။
1. greeting and name of recipient
5. Complimentory close
--Day2ပြီး၏။--
ကျစ်လစ်ခိုင်မာတဲ့ Syllabus ကို Interactive System နဲ့ သင်ပေး သင်ယူနေတယ်လို့ နားလည်ခဲ့ပါတယ်။
(ရှင်းလင်းချက်တွေကို English ဘာသာဖြင့် မရေးပြနိုင်ခြင်းအား သည်းခံပါရန်)
British Council ကဖွင့်တဲ့ Free English Course for Parents ကိုသွားတက်ပါတယ်။ အဲ့ဒီမှာ လက်ရှိ တက်နေတဲ့ ကျောင်းသားရဲ့ အမေ (သို့) အဖေ တက်ခွင့်ရှိပါတယ်။ သင်တန်းချိန်က မနက် ၉နာရီမှ ၁၁နာရီ ဖြစ်တဲ့ အတွက် အလုပ်လုပ်တဲ့ အဖေတွေ လာမတက်နိုင်ကြပါဘူး။ အခွင့်သာတဲ့ အမေ အယောက် ၂၀ ကျော် ခန့် လာတက်တာ တွေ့ရပါတယ်။ တစ်ပတ်ကို နှစ်ရက်တက်ရမှာ ဖြစ်ပြီး နှစ်လခွဲခန့်တက်ရပါမယ်။
သင်တန်း အတွေ့အကြုံလေးကို ဘယ်သူတွေ ဘာတွေကို ဘယ်လိုလုပ်နေတယ်ဆိုတာ ဝေမျှချင်တဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ မိမိခံစားချက်တွေ ယှက်နွယ်ပြီး ရေးသွားပါမယ်။ လေ့လာလိုသူများ လေ့ကျင့်ခန်းတွေကို အတူတကွ လိုက်လုပ်ကြည့်ဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။
သင်တန်းစတော့ တာဝန်ခံဆရာ Mr. Keith က မိတ်ဆက်စကားနည်းနည်းပြောပါတယ်။ ဒီသင်တန်းကို သင်မဲ့ဆရာ၊ ဆရာမ (၁၂)ယောက်ရှိပါတယ် တဲ့ ။ Certificate in English Language Teaching to Adults CELTA ဆရာဖြစ်သင်တန်းတက်နေတဲ့ သင်တန်းသားတွေက သင်မှာ ဖြစ်ပြီး သူတို့ကို တာဝန်ခံဆရာက စောင့်ကြည့် အမှတ်ပေးနေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မိတ်ဆက်စကား အနည်းငယ်ပြောအပြီးမှာ ဒီ လေ့ကျင့်ခန်းလေး ပေးပါတယ်။
Ask them why they are doing the course
Find out something interesting/ unusual about it.
သင်တန်းလာတက်သူတွေမှာ ကိုးရီးယားလူမျိုး အတော်များများပါပါတယ်။ နောက် တရုတ်ပြည်မကြီးမှ ၃, ၄ ယောက်။ တိုင်ဝမ်မှ PhD ရထားသူ တရုတ်အမျိုးသမီး။ အိန္ဒိယမှ ၂ ယောက်။ မြန်မာ ကျမအပါအ၀င် ၂ယောက် (ကျန်တစ်ယောက်က ပထမဦးဆုံး တစ်ရက်ပဲ လာတက်ခဲ့ပါတယ်။) ကျန်တာတွေကတော့ စင်္ကာပူလူမျိုး (တရုတ်၊ ကုလား၊ မလေး) တွေပါ။ စင်္ကာပူမှ လူတစ်စုကတော့ ဒီက Canberra Primary School က ရုံးပိုင်းဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေ ဖြစ်ပြီး သူတို့ကျောင်းက ဒီသင်တန်းအတွက် သီးသန့် စီစဉ်ပြီး လွှတ်တာလို့သိရပါတယ်။
နောက် ဒီ Center က မန်နေဂျာ စကား အနည်းငယ်ပြောပြီး သင်တန်းကို ခဏနားပါတယ်။
သင်တန်းပြန်စတော့ စာသင်ခန်းထဲမှာ name tag တွေ တပ်ထားတဲ့ သူတွေ မိုးတိုးမတ်တပ်တွေ့ရတယ်။ သူတို့ဟာ ဒီသင်တန်းကို လက်တွေ့သင်ရမဲ့ ဆရာလောင်းတွေပါပဲ။ အလျဉ်းသင့်သလို တစ်ယောက်ချင်းဆီနဲ့ မိတ်ဆက်စကား၊ အလ္လာပသလ္လာပတွေ ပြောကြလို့ စီညံနေတော့တယ်။ ဘာသာခြား Language တစ်ခုကို လေ့လာသင်ယူရင် အသုံးချဖို့ အခြေခံ အကျဆုံးကတော့ များများပြောဖို့ ပါပဲ။
နောက်တော့ အောက်ပါခေါင်းစဉ်များမှ တစ်ခုကို မိနစ် ၂၀ အချိန်ပေးပြီး ရေးခိုင်းပါတယ်။
Choose one of the following and write about it.
an interesting experience you have had
my reasons for doing the course
ကျမ နောက်ဆုံးခေါင်းစဉ်ကို ရွေးချယ်ပြီး တောင်စဉ်ရေမရတွေ ရေးခဲ့ပါတယ်။ ဒီ Essay ကို ကြည့်ပြီး (Upper နဲ့ Lower) အတန်း နှစ်တန်းခွဲပြီး သင်ကြားသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်တစ်ချိန် သင်တန်းလာလျှင် စာသင်ခန်းရှေ့မှာ ကပ်ထားမည့် အမည်စာရင်းကို ဦးစွာကြည့်ပြီးမှ မိမိနာမည်စာရင်းပါသော အတန်းမှာ ၀င်ရောက်နေရာယူရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကျမ ဘယ်အတန်းကို ရောက်မယ်ဆိုတာ ခန့်မှန်းလို့ရအောင် ရေးခဲ့တဲ့ Eassy က သင်တန်းမှာ ထားခဲ့ရလို့ ဒီနေရာမှာ ဖော်ပြခွင့် မရတော့ပါဘူး။ မှတ်မိသလောက် ပြန်ရေးချရရင်လည်း စာဖတ်သူများ ခေါင်းရှုပ်သွားမှာစိုး၍ ဒီပို့စ်လေးကိုပဲ ဆက်လက်ဖတ်ရှုပြီး အကဲဖြတ်ကြပါ။
မဟာမြိုင်ဆရာတော် ဦးဇောတိက အမိန့်ရှိခဲ့ဖူးသလိုပဲ ကျမတို့ဟာ English ကို ကျောင်းမှာ နှစ်ပေါင်းများစွာ သင်ယူခဲ့ရပေမဲ့ လက်တွေ့ဘ၀ထဲ မရောက်တဲ့အတွက် ခရီးရောက်သင့်သလောက် မရောက်ကြဘူး။ (အကြောင်းရင်းတွေကို ရှာဖွေကြမည်ဆိုပါလျှင် ကျယ်ပြန့်၍ သုတေသနဆန်မည်မို့ ကိုယ့်ကိုကိုယ်သာဆန်းစစ်ပါမည်။) ငါးတန်း ဆယ်နှစ်သမီးက စလို့ A, B, C, D သင်လာလိုက်တာ English ကို စိတ်ဝင်စားပါတယ်။ ကြောက်စရာကောင်းတယ်ဆိုပြီး ပစ်ထားတဲ့ အခြေအနေမျိုး မရှိခဲ့ပါဘူး။ Speaking သင်တန်း၊ Enrichment Course ဆိုတာမျိုးတွေလည်း ကျောင်းအပြီးမှာ တက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ သို့ပေမဲ့ အမှန်အတိုင်း ၀န်ခံပါတယ်.. ဘ၀ထဲကို မရောက်ခဲ့ပုံများ thank you လို စကားလုံးမျိုး ပြောထွက်ဖို့တောင် အင်မတန်ဝန်လေးခဲ့ပါတယ်။ အခြေအနေရဲ့ ပံ့ပိုးမှုက အရေးပါပေမဲ့ လူကိုယ်တိုင်ရဲ့ ရယူလိုမှုစိတ်ထားကသာ အဓိက ကျပါတယ်။
နောက်တစ်ခုက response ပါ။ ဘာကို ကြားရင် ဘယ်လို တွေးလိုက်ပြီး ဘယ်အထိတာသွားမလဲ ဆိုတဲ့ အချက်မှာ လည်း မျက်တောင်မွှေး တစ်ဆုံးလောက်သာ မြင်တတ်တဲ့ အလေ့ရှိသူမို့ အကျိုးဆက်ကတော့ ဘာသာခြားနဲ့ အမေးစကားလေးတွေ ဆိုလာခဲ့ရင် yes, no ကလွဲလို့ အပို မပြောတတ်တော့ပါ။
ဝေါဟာရကြွယ်ဝမှုမှာလည်း အသုံးများသည့် ပန်းအမည်၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်အမည်၊ ငါးအမည်၊ စသည်ကို မိခင်ဘာသာ နှင့်ပင် မှတ်မှတ်သားသား ပြုတတ်သည့် အလေ့မရှိခဲ့ပါ။
မတတ်ဘူး ပြောရတာကို အရိုးပေါ် အရွက် မဖုံးစေခြင်းသာလို့ သဘောထားတတ်ခဲ့ပါ၍ ပြင်ရပါမည်။
“အဲ့ဒီ မသိဘူး, မတတ်ဘူးကြီးကို ရှေ့ကခံထားပါက၊ ဘယ်မှာလျှင် သိပါ တတ်ပါတော့မည်နည်း”
ပို့စ်ရေးသူလည်း ဘလော့ဂ်ရေး၊ ဖတ်သည့် အချိန်မှ စ၍ ပြင်နေပါပြီ။ အစွန်းဟုဆိုလျှင် မည်သည့်အစွန်းမှ မကောင်းလေသမို့ အနှုတ်အစွန်းမှ ကင်းလွတ်နိုင်ကြပါစေ။
ဘလော့ဂ်သူတွေလေ… ဟိုတစ်ယောက်၊ အိမ်ကလူကြီး၊ ကလေးတို့ အဖေ၊ မောင်ရင်၊ ကို၊ မောင်၊ ...စတဲ့ စတဲ့၊ တော့ ကတွက်ပီ ဆိုတာမျိုးလို နာမ်စားတွေ သုံးသုံးပြီး… အဲ့ဒီ အကြောင်းကိုပဲ မထိခလုတ် ထိခလုတ်၊ မသိသလိုလို သိသလိုလို၊ ထမင်းဟင်းတွေပဲ ချက်ကျွေးနေသလိုလို၊ သီချင်းလေးတွေပဲ နားထောင်နေသလိုလို၊ အမှတ်တရလေးတွေပဲ ကြုံနေဆုံနေသလိုလို၊ အိမ်မက်ထဲက ရွှေမင်းသားလေး လိုလို …အဟေး.. ဟေးဟေး… ပြောချင်ပါဘူး။
တမြန်နေ့က သွားခဲ့တဲ့ မင်္ဂလာဆောင်တစ်ခု။ ဖွင့်လို့ချထားတဲ့ ငွေမှင်ရောင် စာမျက်နှာနဲ့ မင်္ဂလာမှတ်တမ်း စာအုပ်လေးမှာ.. ကိုဧရာက ရေးလိုက်လေ ဆိုလို့… အိမ်း…မသီတာလည်းလေ လောသီသားပေမို့
ချစ်ခင် ကြင်နာ နားလည်စွာ…လို့ ရေးအပြီး…
ဘယ်သူ့အတွက် ဆိုတာ ကမန်းကတန်း ပြန်စဉ်းစားလိုက်ရသေး …အဟေး.. ဟေးဟေး…
အချစ်အကြောင်း ပြောနေခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
Posted by Sonata Cantata 15 comments
ရေချမ်း.chris.cantata ကို ချန်းချန်း ဆွဲထားတဲ့ ပုံလေး ပြတော့ သူကလည်း ဒီလိုလေး ဆွဲလိုက်ပါတယ်။ Tag ပုံ လို့ ခေါ်လိုက်ကြစို့ …
ဒါကတော့ ရေစင်.sam.sonata ရဲ့ လက်ရာ "ကုလားမလေး" လို့ အမည်ရပါတယ်။
Labels: ပန်းချီ, သီတာ
Posted by Sonata Cantata 14 comments
နိကာယ် ၅-ရပ်၏ နောက်ဆုံးပန်းတိုင်သည် ၀ိမုတ္တိရသခေါ် ဒုက္ခခပ်သိမ်း ချုပ်ငြိမ်းသည့် နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဖြစ်သည်။ နိကာယ် ၅-ရပ်အား အကျဉ်းခြုံးလိုက်ပါက အရိယသစ္စာ (မြတ်သော အမှန်တရား) လေးပါးကို ရသည်။ အနာသိမှ ဆေးရှိသည်ဟူသော စကားအတိုင်း အနာရောဂါကို ပျောက်ကင်းအောင် ကုသပေးမည့် သမားတော်သည် အနာရောဂါ၏ လက္ခဏာကို သိသည်။ အနာရောဂါ၏ ဖြစ်ကြောင်း ရောဂါဇစ်မြစ်ကို သိသည်။ ပျောက်ကင်းအောင် ကုသနိုင်သည်ကို သိသည်။ ဆေးနှင့် ကုထုံးကိုလည်း သိသည်။ ထို့အတူပင် ဒုက္ခခပ်သိမ်း ချုပ်ငြိမ်းအောင် ကုသမည့် သမားတော်သည်လည်း ဒုက္ခ, ဒုက္ခဖြစ်ပေါ်ခြင်း (သမုဒယ), ဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းခြင်း (နိရောဓ), ဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းခြင်းသို့ ရောက်စေမည့် အကျင့်လမ်း (မဂ္ဂ) တို့ကို သိရသည်။ ဤကား အရိယသစ္စာလေးပါး ဖြစ်၏။ ရောဂါကုသရာတွင် ရောဂါသည်သည် မိမိတွင်ရောဂါရှိကြောင်းသိ၍ ကုသလိုစိတ် ရှိရန်သာလိုသည်။ ရောဂါဇစ်မြစ်နှင့် ဆေး, ကုထုံးတို့ကိုသိရန်မှာ သမားတော်၏ တာဝန်ဖြစ်သည်။ ဒုက္ခကို ကုစားမည့်သူသည်ကား သစ္စာလေးပါးကို ကိုယ်တိုင် သိရှိ၍ ကိုယ်တိုင် ကုသရန် လိုအပ်လေသည်။ နိကာယ်ငါးရပ်သည်ကား ဗုဒ္ဓညွှန်ကြားခဲ့သော ဆေးကျမ်းကြီး ဖြစ်၏။ နိကာယ်ငါးရပ်သည် ရောဂါကုထုံး ဆေးကျမ်းကြီးသာ မဟုတ်သေး။ ရောဂါရှိသူတို့အား မိမိတို့၏ ရောဂါကို ရိပ်စားမိစေရန်၊ ရောဂါ၏ ဆိုးကျိုးအပြစ်တို့ကို သိရှိနားလည်စေရန် ပြသကာ အချိန်မီ ကုစားနိုင်ကြစေရန် ပညာပေးသော ကျန်းမာရေး ပညာပေးကျမ်းလည်းဖြစ်၏။
ထို့ကြောင့်ပင် ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားသည် တရားဦးဓမ္မစကြာဒေသနာတွင် အရိယသစ္စာလေးပါးအား ဟောကြားခဲ့သည်။
(၁) ဣဒံ ခေါ ပန, ဘိက္ခဝေ, ဒုက္ခံ အရိယသစ္စံ – ဇာတိပိ ဒုက္ခာ, ဇရာပိ ဒုက္ခာ, ဗျာဓိပိ ဒုက္ခော, မရဏံပိ ဒုက္ခံ, အပ္ပိယေဟိ သမ္ပယောဂေါ ဒုက္ခော, ပိယေဟိ ၀ိပ္ပယောဂေါ ဒုက္ခော, ယံပိစ္ဆံ န လဘတိ တံ ပိ ဒုက္ခံ, သံခိတ္တေန ပဉ္စုပါဒါနက္ခန္တာ ဒုက္ခာ။
မွေးဖွားခြင်း (ဇာတိ), အိုခြင်း (ဇရာ), နာခြင်း(ဗျာဓိ), သေခြင်း (မရဏ), မနှစ်သက်သောသူ, မနှစ်သက်သောအရာတို့နှင့် ကြုံတွေ့ရခြင်း (အပ္ပိယေဟိ သမ္ပယောဂေါ), နှစ်သက်သောသူ, နှစ်သက်သောအရာတို့နှင့် ကွဲကွာရခြင်း (ပိယေဟိ ၀ိပ္ပယောဂေါ), လိုချင်သည်တို့ကို မရခြင်း (ဣစ္ဆိတာလာဘ) တို့သည် ဒုက္ခများ ဖြစ်သည်။ စိတ်မချမ်းသာခြင်း, စိတ်ဆင်းရဲခြင်း, ထိတ်လန့်ခြင်း, စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်း, ငိုကြွေးခြင်းတို့ကို ‘ဒုက္ခ’ ဟုခေါ်သည်။ အကျဉ်းချုပ်အားဖြင့်ဆိုက ဥပါဒါနက္ခန္ဓာ ၅-ပါးတို့သည် ‘ဒုက္ခ’ ဖြစ်သည်ဟု ဓမ္မစကြာဒေသနာတွင် ဟောကြားထား၏။
‘ခန္ဓာ’ဟူသော ပါဠိဝေါဟာရသည် ‘အပေါင်းအစု, အစုအဝေး’ဟု အဓိပ္ပါယ်ရသည်။ Aggregates ဟု အင်္ဂလိပ်ဘာသာ ပြန်လေ့ရှိသည်။ မြန်မာ အသုံးအနှုန်းတွင် ‘ခန္ဓာ’အား ‘ကိုယ်’ဟူသော ဝေါဟာရနှင့်တွဲဖက်၍ ‘ခန္ဓာကိုယ်’ဟုသုံးစွဲသည့် ကာယ (Body) ဟူသော အဓိပ္ပါယ်မျိုး မဟုတ်။ ‘ခန္ဓာ’သည် အာရုံတို့အား တွေ့ကြုံခံစားခိုက်တွင် ဖြစ်ပျက်နေသော တရားများကို ဆိုလိုသည်။ ပါဝင်ပတ်သက်နေသော တရားများကို ဆိုလိုသည်။ အာရုံသိမှုအတွေ့အကြုံ (experience) အား ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကြည့်ပါက အုပ်စုငါးစု ပါဝင်ပတ်သက်နေသည်။ ယင်း အုပ်စု ငါးစု, အစုအပေါင်း ငါးပါးအား ခန္ဓာငါးပါး (ပဉ္စ + ခန္ဓာ = ပဉ္စက္ခန္ဓာ) ဟုခေါ်သည်။
စံပယ်ပန်းတစ်ပွင့်အား မြင်သောအခါ အဆင်းအာရုံကို သိခြင်းဟူသော သိမှုဝိညာဏ် (consciousness) ဖြစ်သည်။ စံပယ်ပန်းဟု အမှတ်ပြု၍ သိသော သညာ (perception) ဖြစ်သည်။ သာယာသော ခံစားမှု ဝေဒနာ (feeling) ဖြစ်သည်။ ထိုအာရုံ, မျက်စိအကြည်နှင့် သိစိတ်ဝိညာဏ်တို့ ထိတွေ့ခြင်းဟူသော ဖဿ (contact) ဖြစ်သည်။ အခြားအာရုံများအား အာရုံမပြုပဲ စံပယ်ပန်းအား အာရုံပြုခြင်းဟူသော မနသိကာရ (attention) ဖြစ်သည်။ သိခြင်း, မှတ်သိခြင်း, ခံစားခြင်း, ထိတွေ့ခြင်းစသောတရားတို့အား သိစေ, မှတ်သိစေ, ခံစားစေ, ထိတွေ့စေရန် စေ့ဆော်ပေးသော စေတနာ (intention) လည်း ဖြစ်သည်။ ဤဖဿ, မနသိကာရ, စေတနာစသော ပြုပြင်စီရင်တတ်သော သင်္ခါရတရားများ (mental formations) ဟုခေါ်သည်။ အဆင်းအာရုံနှင့် မျက်စိအကြည်ဟူသော ရုပ်တရားများလည်း ဖြစ်သည်။ စံပယ်ပန်းတစ်ပွင့်အား မြင်သော အာရုံအတွေ့အကြုံတွင် ဤနည်းအားဖြင့် ရုပ်, ဝေဒနာ, သညာ, သင်္ခါရာ, ၀ိညာဏ်ဟူသော ခန္ဓာငါးပါးဖြစ်ပေါ်သည်။
“အတိတ်, အနာဂတ်, ပစ္စုပ္ပန်, အတွင်း, အပြင်, အကြမ်း, အနု, အယုတ်, အမြတ်, အဝေး, အနီး…အလုံးစုံသော” အာရုံအတွေ့အကြုံများမှ ရုပ်တရားအားလုံးအား စုပေါင်း၍ ရုပ်အစုဝေး (ရူပက္ခန္ဓာ) ဟုခေါ်သည်။ ခံစားမှုအားလုံးအား ခံစားမှုအစုအဝေး (ဝေဒနာက္ခန္ဓာ)ဟုခေါ်သည်။ မှတ်သားမှု အားလုံးအား မှတ်သားမှုအစုအဝေး (သညာက္ခန္ဓာ)၊ ပြုပြင်စီရင်မှု အားလုံးအား ပြုပြင်စီရင်မှုအစုအဝေး (သင်္ခါရက္ခန္ဓာ)၊ အာရုံသိမှု အားလုံးအား သိမှုအစုအဝေး (၀ိညာဏက္ခန္ဓာ)ဟု ခေါ်သည်။
ထို ခန္ဓာငါးပါးမှ တစ်ပါးပါးကိုဖြစ်စေ, အားလုံးကိုဖြစ်စေ ပုထုဇဉ်က ‘ငါ’ဟု မှတ်ယူထားသည်။ ‘ငါ့ဟာ’ဟု မှတ်ယူထားသည်။ သာမန်မျှ မှတ်ယူခြင်းမျိုးမဟုတ်။ ဖားကို မြွေဖမ်းသကဲ့သို့ မလွှတ်တမ်း ဆုပ်ကိုင်ထားခြင်းမျိုး ဖြစ်သည်။ ယင်းကို “စွဲလမ်းခြင်း” (ဥပါဒါန) ဟုခေါ်သည်။ ဥပါဒါန်ဖြင့် စွဲလမ်းသော ခန္ဓာငါးပါးအား ပဉ္စုပါဒါနက္ခန္ဓာ (ပဉ္စ + ဥပါဒါန + ခန္ဓာ) ဟုခေါ်သည်။ သင်္ခါရတရားဟူသမျှတို့သည် မမြဲ။ မိမိက “ငါ, ငါ့ဟာ”ဟု စွဲလမ်းမှတ်ယူထားသော အရာတို့ မမြဲ, ပျက်စီး, ဖောက်ပြန်သောအခါ၊ စိတ်ပျက်ခြင်း, ထိတ်လန့်ခြင်း, စိတ်ပူပန်ခြင်း, စိတ်ဆင်းရဲခြင်းတို့ ဖြစ်သည်။ ဤသည်ကိုပင် ဓမ္မစကြာဒေနာတွင် “သံခိတ္တေန ပဉ္စုပါဒါနက္ခန္ဓာ ဒုက္ခာ- အကျဉ်းအားဖြင့် စွဲလမ်းရာ ခန္ဓာငါးပါးသည် ဒုက္ခဖြစ်၏” ဟုဟောကြားထားခြင်း ဖြစ်သည်။
“ဒုက္ခသည် စွဲလမ်းရာ ခန္ဓာငါးပါးဖြစ်သည်”ဟုသိခြင်းသည် ပထမအရိယသစ္စာဖြစ်သော ဒုက္ခသစ္စာကို သိခြင်းဖြစ်၏။
၄။ မ-၁-၃၀၆၊ သြပမ္မ၀ဂ်-မဟာဟတ္ထိပဒေါပမသုတ်
“ဗုဒ္ဓဘာသာကို စနစ်တကျ လေ့လာချင်ပါတယ်။ ဘယ်လို လေ့လာရပါမလဲ” လို့ နိုင်ငံခြားသား ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တစ်ဦးက ကျွန်တော်အား မေးဖူးသည်။ အကြောင်းရင်းကို မေးကြည့်တော့၊ “ဟိုဟိုဒီဒီ စာအုပ်တွေ ဖတ်၊ တရားတွေ နာလို့ သိတာတွေလည်း အတော်များပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဟိုတစ်စ, ဒီတစ်စ ဖြစ်နေပြီး, သေခြာ မသိသေးသလိုဖြစ်နေလို့ပါ” ဟုအဖြေပေးသည်။ ‘စနစ်ကျခြင်း’ဟူသော ဝေါဟာရ၏ အနက် အဓိပ္ပါယ်ကို ပြန်၍ စဉ်းစားမိသည်။ ဤတွင် လှေကားထစ်တက်သကဲ့သို့ လွယ်ရာမှ ခက်ရာသို့ တစ်ဆင့်ပြီး တစ်ဆင့် (step-by-step) လေ့လာခြင်းကို စနစ်တကျ လေ့လာခြင်း ဟုဆိုနိုင်သည်။ တနည်းအားဖြင့်လည်း တိုင်, ထုတ်, ယက်မ, ဒိုင်း, နံရံ, အမိုးစသော အစိတ်အပိုင်းများကို သူ့နေရာနှင့်သူ ချိတ်ဆက်ပေါင်းစပ်၍ အိမ်တစ်ခုတည် ဆောက်သကဲ့သို့၊ ဟိုတစ်စ, ဒီတစ်စ ပြန့်ကျဲနေသော အစိတ်အပိုင်းများအား တစ်ခုနှင့် တစ်ခု ဆက်စပ်ပေါင်းစည်းကာ တစ်စုတစ်စည်းတည်း သိမ်းယူတည်ဆောက်၍ part-whole အားဖြင့် လေ့လာခြင်းမျိုးကိုလည်း ဆိုနိုင်ပါသည်။ တစ်ဆင့်ပြီး တစ်ဆင့် အစဉ်အတိုင်း လေ့လာသည်ဖြစ်စေ, အစိတ်အပိုင်းများအား စုစည်းပေါင်းစပ်ကာ ပြီးပြည့်စုံသော အမြင်တစ်ခုရရန် လေ့လာသည်ဖြစ်စေ, ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုသို့ ပို့ဆောင်ပေးနိုင်စေရပါမည်။
ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ ၄၅-နှစ်တာ ဟောကြားခဲ့သောတရားတော်များ၏ အနှစ်သာရ, ရည်ရွယ်ချက်ပန်းတိုင်သည် ‘၀ိမုတ္တိရသ’ ခေါ် လွတ်မြောက်မှု ချမ်းသာဖြစ်သည်။ သို့သော် ပုဂ္ဂိုလ်တို့၏ ဉာဏ်အတိမ်အနက်, ကိလေသာအထူအပါး, အကျင့်စရိုက်, ၀ါသနာတို့ကိုလိုက်ကာ ရှုထောင့်အမျိုးမျိုး, နည်းပရိယာယ်အမျိုးမျိုးဖြင့် တရားဓမ္မကို ဟောကြားတော်မူခဲ့သည်။ ၀ိမုတ္တိရသ နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကို လက်လှမ်း မမှီနိုင်သေးသူတို့အားလည်း အပါယ်ဒုဂ္ဂတိသို့ မကျရောက်စေရန် တမလွန် အကျိုးစီးပွား (သမ္ပရာယိက ဟိတသုခ) အတွက် ဟောကြားသည်။ ထို့အတူ မျက်မှောက်ဘ၀ ကြီးပွားရေး, စီးပွားရေး, လူမှုရေး, နိုင်ငံရေးစသော အကျိုး စီးပွားများ (ဒိဋ္ဌဓမ္မ ဟိတသုခ) အတွက်လည်း ဟောကြားသည်။ မြတ်စွာဘုရား ပွင့်ထွန်းလာခြင်းသည် လောကသားတို့၏ အကျိုးစီးပွားအတွက်ဖြစ်သည် ဟူသောစကားအတိုင်း နိကာယ် ၅-ရပ်တို့၏ ရည်ရွယ်ချက်သည် (၁) မျက်မှောက် အကျိုးစီးပွား (ဒိဋ္ဌဓမ္မ ဟိတသုခ)၊ (၂) တမလွန် အကျိုးစီးပွား (သမ္ပရာယိက ဟိတသုခ) (၃) ၀ိမုတ္တိသုခ ဟူသော အကျိုးသုံးပါးဖြစ်သည်။
ထိုရည်ရွယ်ချက်တို့အား ပို့ဆောင်ရန် တရားဒေသနာတို့ကို တစ်ဆင့်ပြီး တစ်ဆင့်လွယ်ရာမှ ခက်ရာသို့ အစဉ်အတိုင်း ဟောကြားထား၏။ ဤသို့ဟောကြားခြင်းအား အနုပုဗ္ဗိကထာ (အစဉ်အတိုင်းသော စကား) ဟု ခေါ်သည်။ ဒါန, သီလမှ အစပြု၍ ကာမဂုဏ်တို့၏ အပြစ်၊ ကာမဂုဏ်တို့မှ လွတ်မြောက်ခြင်းအကျိုးတို့ကို ဟောကြားကာ နောက်ဆုံးတွင် သစ္စာလေးပါးတရားအား ဟောကြားသော အစီအစဉ် ဖြစ်သည်။ ဟောစဉ်အရ ဤသို့ အနုပုဗ္ဗိကထာဖြင့် ဟောကြားသကဲ့သို့ ကျင့်စဉ်အရလည်း သီလ, ဣနြေ္ဒတို့ကို လုံခြုံအောင် စောင့်ထိန်းခြင်း, ရောင့်ရဲခြင်း, သမာဓိထူထောင်ခြင်း စသော အနုပုဗ္ဗသိက္ခာ, အနုပုဗ္ဗကိရိယာ, အနုပုဗ္ဗပဋိပဒါ ခေါ် လုပ်ငန်းစဉ်, ကျင့်စဉ်များကို ဟောကြားထားသည်။ ထိုဟောစဉ်များအားဖြစ်စေ, ကျင့်စဉ်များအားဖြစ်စေ အကျဉ်းခြုံးလိုက်ပါက သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာဟူသော သိက္ခာသုံးပါး၊ အုပ်စုသုံးစုရသည်။ နိကာယ် ၅-ရပ်တို့၏ အနှစ်သည် သီလ, သမာဓိ, ပညာဟူသော ဒေသနာစဉ်သုံးပါး၊ ကျင့်စဉ်သုံးပါးဖြစ်သည်ဟု ဆိုနိုင်ပါသည်။ ရှင်မဟာဗုဒ္ဓဃောသ ပြုစုခဲ့သော ‘၀ိသုဒ္ဓိမဂ္ဂ’ အဋ္ဌကထာသည် ဤ သီလ, သမာဓိ, ပညာသုံးပါးအား အကျယ်ပြန်လည်ဖွင့်ဆိုထားသော နိကာယ် ၅-ရပ်တို့၏ အဖွင့်ကျမ်းတစ်ဆူ ဖြစ်သည်။
မြတ်စွာဘုရားဟောကြားခဲ့သော ဒေသနာတော်များသည် သုတ္တန် အမျိုးမျိုး၊ အသွင် အမျိုးမျိုး ကွဲပြားနေသော်လည်း တစ်ခုနှင့်တစ်ခု ၀ိရောဓိဖြစ်မနေပဲ၊ ပတ်သက်ဆက်နွယ်နေသည်။ တိုင်, ထုတ်, ယက်မ, ဒိုင်းတို့ဖြင့် အချိုးညီညီ တည်ဆောက်ထားသော အိမ်တစ်လုံးကဲ့သို့ နိကာယ် ၅-ရပ်၏ အစိတ်အပိုင်းများကို ပေါင်းစပ်သိမ်းယူနိုင်သည်။ နိကာယ် ၅-ရပ်၏ အစိတ်အပိုင်းများကို ပေါင်းစပ်၍ ခြုံငုံကြည့်ပါက တရားဦး ဓမ္မစကြာဒေသနာတွင် ဟောကြားခဲ့သော သစ္စာလေးပါးတရားကို တွေ့ရပါမည်။ ကုန်းသတ္တ၀ါတို့၏ ခြေရာများသည် ဆင်ခြေရာတွင် အကျုံးဝင်သကဲ့သို့ ကုသိုလ်တရားအားလုံးတို့သည် သစ္စာလေးပါးတရား၌ အကျုံးဝင်သည်ဟု ရှင်သာရိပုတ္တမထေရ်က မဟာဟတ္ထိပဒေါပမသုတ်တွင် ဟောကြားထားသည်။
အနီးမှကြည့်လျှင် သစ်ပင်ပန်းမာလ် အမျိုးမျိုးကိုတွေ့နိုင်၍ အဝေးမှလှမ်း၍ ကြည့်လျှင် ဥယျာဉ် တောအုပ်ကို တွေ့ရမည်။ ထို့အတူပင် နိကာယ် ၅-ရပ်တွင် ပဋိစ္စသမုပါဒ်ဒေသနာ, သတိပဋ္ဌာန်ဒေသနာ, အနတ္တဒေသနာ, ဗောဓိပက္ခိယတရား, ခန္ဓာ, အာယတန, ဓာတ်, ကိလေသာ, သံယောဇဉ်, နီဝရဏစသဖြင့် ရှုထောင့်အမျိုးမျိုးမှ ဒေသနာအမျိုးမျိုး တွေ့နိုင်သော်လည်း ထိုဒေသနာများအား ဒုက္ခ, ဒုက္ခဖြစ်ခြင်း (သမုဒယ), ဒုက္ခချုပ်ခြင်း (နိရောဓ), ဒုက္ခချုပ်ခြင်းသို့ရောက်စေနိုင်သည့် အကျင့်လမ်း (မဂ္ဂ) ဟူ၍ သစ္စာလေးပါးတရားတွင် အကျုံးဝင်ပါသည်။ မည်သို့ဆက်စပ် အကျုံးဝင်ပုံကို အောက်ပါ mind-map ဖြင့် စိတ်ကူးပုံဖော် ကြည့်နိုင်ပါသည်။ mind-map ဟုဆိုသည့်အတိုင်း ဂြိုလ်တုမှရိုက်ထားသော အတိအကျ မြေပုံမျိုးတော့ မဟုတ်ပါ။ ပြီးပြည့်စုံသော ပုံစံတစ်ခု မဟုတ်ပါ။ သို့သော် ဤပုံစံဖြင့် နိကာယ် ၅-ရပ်မှ ဒေသနာ အတော်များများအား အဝေးမြင်ရှုခင်းမှ ကြည့်ရှုလေ့လာနိုင်ပါသည်။ နိကာယ် ၅-ရပ်ဟူသော တောအုပ်တွင်းသို့ ၀င်၍ သစ်ပင်ပန်းမာလ်တို့အား လှည့်လည် ရှုမောသုံးသပ်နိုင်ပါစေ။
မြန်မာ e-books တွေရှာရင်း ဤနေရာမှာ လွတ်လပ်ရေးမရမီ စစ်ငွေ့သန်းနေချိန်က ထုတ်ဝေခဲ့သော ဂျာနယ်များကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ထိုခေတ်ပိုင်းဆီက သတင်းစာ၊ မဂ္ဂဇင်း၊ ဂျာနယ်များကို မဖတ်ဖူးသေး။ လွတ်လပ်ရေးမရခင်ခေတ်က ဂျာနယ်များသည် ဘယ်လိုပါလိမ့်ဟု သိချင်ဇောဖြင့် download လုပ်ပြီး (မြန်မာ့အလင်း သတင်းစာ အယ်ဒီတာဟောင်း) ဦးချစ်မောင်အား ဂျာနယ်ကျော် ချစ်မောင်ဟု ၀ိသေသဂုဏ်ထူးရစေခဲ့သည့်
အပတ်စဉ် စနေနေ့တိုင်း ထုတ်ဝေသောဂျာနယ် ဖြစ်သည်။ ဂျာနယ်တို့ ထုံးစံအတိုင်း ပြည်တွင်းသတင်း၊ နိုင်ငံတကာသတင်းများ၊ အထူးသဖြင့် ဒုတိယကမ္ဘာစစ်သတင်းများကို ဦးစားပေး ဖော်ပြထားသည်။ ‘ရုပ်ရှင်-ပညာသည်များ’ ဟူသော ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ရုပ်ရှင်မင်းသမီးများ၏ အထုပ္ပတ္တိဆန်ဆန် ဆောင်းပါး တစ်ပုဒ် အပတ်စဉ်ပါသည်။ ဗေဒင်ကဏ္ဍဟု သီးသန့် ထားပုံမရသော်လည်း မြန်မာပြည်ရှေ့ရေး၊ ကမ္ဘာစစ်ရှေ့ရေးတွက်ချက်ထားသော ဗေဒင်ဆောင်းပါးများလည်း အပတ်စဉ်လိုလို ပါသည်။ ထိုမှဤမှ ကောက်နှုတ်ဖော်ပြထားသော ‘သူတို့အပြော’၊ ‘နယ်များ၌ မည်သို့ဖြစ်နေကြပြီနည်း’ ဟူသော နယ်သတင်း၊ ‘ဤအချက်များကို မကျေနပ်’ ဟူသော ဟစ်စာ, တိုင်စာကဏ္ဍ၊ ‘အယ်ဒီတာထံသို့ ထိုမှဤမှပေးစားများ’၊ အမျိုးသမီးများအတွက် ကိုယ်ကာယ ကျန်းမာရေး လေ့ကျင့်ခန်း ဆောင်းပါးများ၊ ဆရာဇ၀န၏ ‘ဦးလေးပြောမယ်’ နှင့် ၀တ္ထုတိုတို့သည် ပုံမှန်အပတ်စဉ် ကဏ္ဍများ ဖြစ်သည်။ အခြားအပတ်စဉ်ကဏ္ဍများဖြစ်သော ဓာတ်ပုံနှိုင်းယှဉ်ချက်, တက်ခေတ်သတ်ပုံ, ကျွန်ုပ်တို့၏ ခေါင်းမာသော ရုပ်ပြောင်ရေးဆရာတို့သည်လည်း သရော်စာဆန်ဆန် စိတ်ရွှင်မြူးဖွယ်ဖြစ်သည်။
ပါတော်မူနေ့-အမျိုးသာနေ့ အထိမ်းအမှတ် ထုတ်ဝေသော စာစောင် (အတွဲ ၃၊ စာစောင် - ၄၊ ၁၉၃၉ ဒီဇင်ဘာလဆုတ် ၇-ရက်)တွင် ရှေ့မျက်နှာဖုံး၌ စစ်သူကြီး မဟာဗန္ဓုလအား အင်္ဂလိပ်အရာရှိတစ်ဦးက အရိုအသေပေးနေပုံနှင့် အတွင်းဖုံးတွင် သီပေါမင်းနှင့် စုဖုရားလတ်တို့၏ ဓာတ်ပုံများကို ဖော်ပြထားသည်။ ဂျာနယ်တစ်ခုလုံးလည်း ပါတော်မူနေ့နှင့် အခြား ဇာတိမာန်တက်ကြွစေသည့် ဆောင်းပါး၊ ၀တ္ထုများ ဖော်ပြထားသည်။
သတင်း, ဆောင်းပါးမှအစ စီးပွားရေးကြော်ငြာများထိ ဂျာနယ်တစ်ခုလုံးတွင် စစ်ကြီး၏ အငွေ့အသက်နှင့် လွတ်လပ်ရေး ကြိုးပမ်းမှုတို့ ပေါ်လွင်နေပါသည်။
တိုင်းပြည်မွဲအောင်၊ ကိုယ်ကျိုးဆောင်၊ ခေါင်းရှောင်ကိုလည်း ငသတ်မည်။
တိုင်းပြည်မွဲငတ်၊ အစားပြတ်၊ ဆူတတ်ကိုလည်း တသတ်မည်။
မြန်မာ ချင်းချင်း၊ မေတ္တာကင်း၊ ခက်ခြင်းကိုလည်း ငသတ်မည်။
၀ါးရင်းတုတ်စွဲ၊ ဂဠုန်ကဲ၊ မိုက်ရဲကိုလည်း နောက်ပစ်မည်။ (ဂဠုန်ဦးစော၏ ၀ါးရင်းတုတ်တပ်ကိုဆိုလိုသည်။)
ကျွန်ုပ်တို့၏ ခေါင်းမာသော ရုပ်ပြောင်ရေးဆရာ
The Weekly Thunderer (Vol2-No.2 August 26, 1939)
The Weekly Thunderer (Vol2-No.12 November 4, 1939)
၆၁ နှစ်မြောက် လွတ်လပ်ရေးနေ့ အမှတ်တရ
Labels: အမှတ်တရ, ဧရာ, ဝေမျှခြင်း
မိန်းမသားတစ်ယောက်၊ ညီမ အစ်မတစ်ယောက်၊ သမီးတစ်ယောက်၊ ဇနီးမယားတစ်ယောက်၊ မိခင်တစ်ယောက် အနေနဲ့ ချစ်ခြင်း မေတ္တာနဲ့ အကြင်နာတရားအကြောင်း
ကုသိုလ်ဖြစ်စာသင်ကျောင်းလေးရဲ့ ဆရာမတစ်ယောက်၊ ဖွံဖြိုးဆဲဆိုတဲ့ နိုင်ငံငယ်လေးရဲ့ အဝေးရောက်ပြည်သူတစ်ယောက် အနေနဲ့ တာဝန်နဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့်အကြောင်း
လူသားတစ်ဦး၊ သတ္တ၀ါတစ်ခု အနေနဲ့ ကိုယ်ချင်းစာနာမှုနှင့် ဆင်ခြင်တုံတရားအကြောင်း
အနှိုင်းမဲ့ ကျေးဇူးတရား ကြီးမားတော်မူသော မြတ်ဗုဒ္ဓထံ နည်းနာခံယူတဲ့ တပည့် တစ်ယောက်အနေနဲ့ အမှန်တရားနဲ့ အကျင့်သိက္ခာ အကြောင်း